Kanjani ukuze uthole umsebenzi ngaphandle isipiliyoni? Lo mbuzo uyabuzwa hhayi kuphela studio ngemva kokuphothula inyuvesi, kodwa futhi labo akusebenzanga okukhethekile yabo.
Ngokulandelayo, ake sixoxe yokwamukela ngempumelelo umsebenzi oyifunayo, noma ngabe wasebenza hhayi ngaphambi kwalokho.
Iqiniso ukuthi Izishoshovu anqume yonke into, wazi konke, futhi kuqala kunazo zonke abaqashi. Laba bantu ozama ukuthola nabasebenzi abangcono kakhulu. Phela, kuncike kubo futhi kungani leso senzo sabo kuncike impumelelo ibhizinisi. Ngenxa yalesi sizathu, uma ubona i-ad efuna umsebenzi, izimfuneko ikhandidethi kuyingozi kakhulu: imfundo ephakeme, owazi isiNgisi, yebo, nakho. Kodwa lapho ukuthatha kuso? Akuwona wonke umuntu lucky ngokwanele ukuba ukusebenza okukhethekile, ikakhulukazi uma umuntu usanda kuqeda ukuyothola imfundo. Nokho, ungaphikisana umqashi, futhi ngaphandle kwalo. Funda ku - indlela.
Lokhu kwakudinga idokhumenti uma sisebenzisa imisebenzi ukumela wena lapho ukhetha umsebenzi ukuze umsebenzi othize.
Ukufingqa kumele kwenziwe ngendlela efanele, ikakhulukazi uma unentshisekelo kanjani ukuthola umsebenzi ngaphandle isipiliyoni. Ukufingqa - leli yigama lakho, ikheli, isimo somshado, imfundo (udinga ukucacisa okukhethekile), yisakhamuzi. Kodwa, ngaphezu, isishwankathelo kufanele sikusho amakhono akho owengeziwe. Uma unesithakazelo ukusebenza kungekho nakho abafundi, bese ngempela kufanele uchaze konke wazi futhi wazi kanjani. Ngokwesibonelo, ifa program e-computer. Kanye khona izincwadi zokushayela, imoto futhi ikhono ukuyisebenzisa umsebenzi wabo.
Izilimi ubungoti babalulekile kakhulu. Uma ezingeni eyanele, wena abazi ulimi oluthile, kodwa ngenxa yokuntuleka umkhuba manqikanqika ukuzama khombisa isizathu esihle kakhulu! Kodwa amanga, uma empeleni bengenayo, kanti akunjalo.
Yini ukubhala "isipiliyoni", uma lokho akuyona?
Kanjani ukuze uthole umsebenzi ngaphandle isipiliyoni - yilokho oyithandayo kakhulu abafundi usuqede izifundo zabo. Lo mbuzo akunakugwenywa ku abstract. Nokho, thina ngeke uthole, bese uphendula ke ngenhlonipho.
Phela, mhlawumbe uke kwenziwa i-internship, ngakho ukubhala ngakho. Uma une isici esihle endaweni yokwenza, usungayinamathisela ukuze uqhubeke. Izosebenza kahle wena. Abafundi abaningi ukusebenza ingxenye isikhathi ngenkathi ngitadisha, futhi ivame kakhulu ukuba kukhiqizwe ephakeme okukhethekile imfundo: abagqugquzeli, bartenders, oweta. Sikukhuthaza ukuba sinikeze ngale nesipiliyoni isifinyezo. Phela, kusho ukuthi sebekujwayele zabasebenzi isiyalo, uyazi ukuthi ukuxhumana namakhasimende. Ake umsebenzi onjalo awahlobene lo msebenzi "sina", kodwa lokho unesithakazelo nomholo kakade umusa wakho.
Ngingaba bhala ukuthi isipiliyoni, uma akusiyo?
Ake sithi uyazi ukuthi umphathi ngaphandle asisoze nentshisekelo umqashi incane kakhulu ukwedlula ngomuzwa. Ake sithi unomngane isisebenzi inkampani. Futhi uma lona oxhumana nabo, ke uyokwazi uqinisekise ukuthi wayesebenze futhi wasebenza kahle.
Ngakho kungani ungabhali ukuthi nakho kule nkampani kwi okukhethekile oyifunayo? Empeleni, kwakuthiwa kwasenza sakwazi ukwenza lokhu. Kodwa ngisho ehhovisi kakhulu elula efana isikhonzi noma umdayisi esitolo ukunikeza abanye babe batfutfukisa emakhono nelwati, futhi yini ukusho, uma, isibonelo, amanga, base umphathi yokuthengisa noma wamabhuku ezimali? Amanga kuzoveza ngosuku lokuqala kakhulu emsebenzini wakho. Believe me, kungcono ukuba bavume ukuthi awunawo nakho, futhi ubonise ukuzimisela kwabo ukusebenza kuka amanga kanye namabhokisi amathathu yamakhono awo, bese sabanjwa amanga.
Ukuxabana - interview
Qalisa ithi ngawe eziningi, kodwa kakhulu bekutshela ngokuphila kwabo ngesikhathi interview. Indlela ukuthola umsebenzi ngaphandle isipiliyoni, wedlula uya engxoxweni yokuhlolelwa umsebenzi? Phawula la mathiphu:
Ziphatheni ngokuqiniseka kodwa hhayi kakhulu baphakamisé ikhanda labo. ukumamatheka epholile, aqine izwi show ukuthi ungakwazi, futhi ukhathazeke, kodwa bayakwazi ukudonsa ngokwami ndawonye esimweni esicindezelayo, okuyinto i interview. Bheka ngqo emehlweni lomsakazi sika - ngobumnene, hhayi kabi.
Phendula imibuzo ukuthi ubuza, ngokwethembeka. Akubalulekile ukuba aqambe amanga, njengoba egijima ezungeza amehlo sathini ngakho kungcono kunanoma ikuphi umtshina amanga.
Ukuze uthole ingxoxo kufanele sigqoke ngokuqonda. Uma ungowesifazane, kungcono ukwenza up nhlobo kunokuba wenze esimnandi "impi upende". Musa ukugqoka eningi ubucwebe.
Uma isihloko ucwaningo wenu ukusebenza ngemva kokuthweswa iziqu, umqashi angase imibuzo embalwa iphrofayela ukuhlola ulwazi. Ngokwesibonelo, uma uye wafunda Faculty of Economics, ungabese ukubuza, yini ohlangothini, inzuzo noma umkhiqizo wonyaka wonke ohlangene. Uma uphendule nge smile kubangela amahloni "Angikhumbuli", okungukuthi, yebo, ngeke esivuna yakho.
Cabanga ukuthi awazi yini. Izingubo zakho, ukubukeka, ukuziphatha ozokhuluma okuningi yamazwi akho. Umuntu owembethe Tastefully, kodwa ayikhanyi kakhulu, ethembekile, oqondile, futhi unethemba ngokwanele ngokwazo namakhono azo, kuzodala okuvelayo omuhle.
Okufanele ukwenze uma isikhundla oyifunayo akunakwenzeka ukuthola ngaphandle isipiliyoni?
Ngokudabukisayo, kodwa namanje kukhona ithuba lokuthi ngeke athole isikhundla osithandayo ngenxa yokuthi awunawo isipiliyoni. Akunandaba! Ungasebenzisa le nkampani, kodwa esimweni ehluke ngokuphelele.
Ngokwesibonelo, i-umsizi ngaphandle isipiliyoni kuyadingeka cishe kuyo yonke indawo. Kanye umsizi zokuphatha, umphathi wehhovisi. Abahluthula isipiliyoni ezifana ngosiko, kokuba ngajwayelana besibhedlela, sinjani onyakeni owodwa noma emibili, ungakwazi kalula ukushintshela isikhundla oyifunayo, uma ufuna, yebo. Vele ungazindeli isifiso sakho ngokwakho, ake isidingo umsebenzi intuthuko abaziphethe.
Ubani Ngiyithola isikole samabanga aphakeme?
Ucabanga ukuthi umsebenzi can kuphela post-lesibili noma imfundo ephakeme? Akunjalo ngempela! Eqinisweni, umsebenzi ngemva kokuthweswa iziqu ehlukahlukene. Futhi ungathola into njengenhlangano imali eyengeziwe noma eyinhloko. Abafundi kungenziwa bekwi-yamuva?
1. umdayisi noma Sales. Ungakwazi ukudayisa noma ukugqugquzela iklayenti bayothenga lowo mkhiqizo.
2. Ukuhlanganyela nokwabelana. Distribution lamapheshana ezitolo, tastings kokuqhuba nezinye isebenze ukudayiswa nokwabelana.
3. Courier, ukudla deliveryman.
4. Isitika ukukhangisa kanye izimemezelo.
Umsebenzi ngaphandle okuhlangenwe nakho abesifazane
Amanye amantombazane ukukhulelwa ngesikhathi ukuqeqeshwa esikoleni esiphakeme, ngakho ngemva kokuthweswa iziqu ngokushesha uye ku sokubeletha. Ngakho-ke, lapho ukhetha yokwakha ama-career, umqashi ngifuna nezifundiswa abasha okungenani uhlamvu usawoti.
Kodwa lokho akusona isizathu walala izingalo zabo futhi musa ngisho zama ukuthola indawo! Thatha ku izingalo amathiphu kanjani ugcwalise phindela inhlolokhono. Futhi, cabanga ukuthi ufuna ukusebenza okukhethekile, noma mhlawumbe unesithakazelo okunye? Accounting kanye ezezimali - kungcono isidina okuningi kuna, isibonelo, umxhumanisi esitolo nge izingubo zabesifazane kanye izimonyo. Umsebenzi onjalo ngaphandle okuhlangenwe nakho abesifazane ngezinye izikhathi imizwa ezifanelekayo usebenzisa imali engaphansi futhi alethe okuningi njengoba, ngokwesibonelo, isikhundla isisebenzi sasebhange. Ngaphezu kwalokho, kukhona njalo sifuna amakhosi manicure kanye pedicure, izinwele, ezemidlalo abafundisi. Ngemva kokuphothula izifundo akuyona eqolo, uthola idiploma yesibili futhi kungaba ngokushesha imali.
Leyo misebenzi akuzona eziyinkimbinkimbi kakhulu, kunalokho, uyokwazi ukuthola imali ngendlela ajabulisayo endaweni enhle, ngaphandle kokwenza ukuhlinza.
Bukela ngaphandle isipiliyoni: kuphi
Uma ufuna hhayi kuphela imali ngomsebenzi kodwa futhi ukuba baphilele ukuthola injabulo, ngeke asondele umsebenzi amashifu. Yini ekhethekile ngale igrafu? Awudingi ukuba khona emsebenzini izinsuku ezinhlanu ngesonto amahora ayisishiyagalombili. Ngeke ukusebenza schedule ekhethekile evunywe ubuholi. Ngokwesibonelo, kungaba ukusebenza empilweni isikimu ngemuva kwamahora amathathu zomsebenzi ngenyanga - ngenyanga lokuphumula, kanye nezinye uhlelo.
Bukela ngaphandle isipiliyoni kungenzeka uma ungenawo bangafuni umsebenzi wezandla. Ngokwesibonelo, siyohlale ukufunwa razno- nezisebenzi, nabalindisango, onogada, Packers. Yini benze abathwala impahla kanye nonogada, yebo. Kodwa lokho kungumsebenzi izisebenzi? Lapha sidinga ukukhuthazela, futhi okungenani ukulolonga umzimba okungenani. Kungcono ukusebenza ngokushintshana okumele ikhokhwe kwi enyakatho yeRussia, kodwa ungakwazi park ezweni lakubo.
Uma ungenakho okuhlangenwe nakho, akusho ukuthi ngeke ukwazi ukuthola. Une ongakhetha eziningana:
Zama ukuba benze i-interview e-isikhundla oyifunayo, ngisho noma izimfuneko ababezobhapathizwa wabonisa ukuthi umsebenzi nakho liyadingeka. Uma uzokwenza kunganikeza umbono omuhle umqashi, ngeke badikibale emhlabeni isitimela ngesikhathi umsebenzi.
Kwenzeka ukuthi bahle akwanele. Zama ukuthola le nkampani isikhundla, lapho isipiliyoni ayidingekile. Ngemva kokusebenza kancane, uzothola lokujwayela iziqondiso yangaphakathi namasiko, ube ukuphathwa ajwayelekile. Kungenzeka ukuthi ngemva kwesikhathi esithile uyoshukumiseleka kwindawo oyifunayo.
Uma ungenayo isipiliyoni ngenkani sibuthathe, awucabangi uma ufuna ukushintsha okukhethekile? Sebenza njengomgcini wamabhuku ezimali noma umnikazi lapho isidina ezingaphezu kuka ukweluleka amakhasimende esitolo, ukuqhuba ukuqeqeshwa ukufaneleka, bahlanganyele izinwele izandiso kanye nail. Thola okukhethekile yesibili futhi ngokushesha uthole phansi ibhizinisi, oyoletha imali.
Uma ufuna uthole imali nje kuphela kodwa abe esiningi khulula, uyoba asondele umsebenzi amashifu. Lokhu kusho ukuthi uhlelo akuyona bendabuko, ngesimo ngesonto wezinsuku ezinhlanu, futhi abanye, ezifana inyanga umsebenzi - ngenyanga lokuphumula. Imali ungathola ehloniphekile. Futhi ukuze uthole Packer, yesisebenzi noma unogada, akukho isipiliyoni esidingekayo.
Lokushisa kwezinkambiso emsebenzini. Okufanele ukwenze, uma izinga lokushisa endaweni yokusebenza ngenhla evamile
Ubhiya Russian: Umlando kanye iresiphi
Anisette - isiphuzo entsha lwabashicileli ubudala
Cheburek: ikhalori ukudla ofakwe ezahlukene
"Sovigripp" (umgomo): ukubuyekezwa kodokotela neziguli. Incazelo, imiyalo, Izimo